Ụgbọ elu San José na -akwụsị na Chicago na -alaghachi n'ụgbọ elu America
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ụgbọ elu San José na -akwụsị na Chicago na -alaghachi n'ụgbọ elu America
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọrụ na-akwụsịghị akwụsị na Chicago-O'Hare site na ọdụ ụgbọ elu Mineta San José na-alaghachi n'ụgbọ elu America.
Ndị ụgbọ elu America na-amalite ọrụ San Jose-Chicago.
Ndị ụgbọ elu America ga-eji ụgbọ elu Boeing 737-800 nke ụzọ San Jose-Chicago.
Ọdụ ụgbọ elu San Jose na -aga n'ihu na -achọ iyi mkpuchi ihu.
Ndị ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Norman Y. Mineta San José International Airport (SJC) kwupụtara na ọrụ adịghị akwụsị akwụsị na ọdụ ụgbọ elu Chicago O'Hare International (ORD) na -amaliteghachi n'ụgbọ elu America taa. Ọrụ agbasawanye n'etiti Silicon Valley na The Windy City na -arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu, Tuesday ruo Fraịde.
Ụgbọ elu ahụ na-apụ na San José na 1:07 PM PST n'ime ụgbọ elu Boeing 737-800, rutere Chicago ihe dị ka awa 4.5 mgbe e mesịrị na 7:40 PM CST.
John Aitken, onye isi ụlọ ọrụ kwuru, "Ọ bụ ihe obi ụtọ ịnabata ọrụ ndị ụgbọ elu America na Chicago." Ọdụ ụgbọ elu Mineta San José International. “Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe ngosi ọzọ dị mma maka mgbake, anyị na -eme ememme na nghọta na ndị njem ga -agbasi mbọ ike maka ahụike na nchekwa. Anyị na -ekele ndị mmekọ anyị na Amerịka maka ịga n'ihu a ma na -ekele ha maka itinye ego na Silicon Valley. "
Ọ bụ ezie na nlọghachi nke ọrụ na -akwụsịghị akwụsị na obodo ukwu na -anọchite anya ezigbo akara mgbake njem, ebe ọkwa COVID na -arị elu na steeti ụfọdụ, ọdụ ụgbọ elu na -aga n'ihu na -achọ iyi mkpuchi ma na -agba ndị njem ume ka ha gaa n'ihu na -eme ndọpụ mmekọrịta.
Chicago-O'Hare laghachi na usoro ọrụ ikuku nke America na SJC na-esochi nkwụsị ụgbọ elu na 2020 n'ihi mbelata nke njem njem metụtara COVID-19.
Ọdụ ụgbọ elu Mineta San José International (SJC) bụ ọdụ ụgbọ elu Silicon Valley, ụlọ ọrụ na -akwado onwe ya nke Obodo San Jose nwe ma na -arụ. Ọdụ ụgbọ elu, ugbu a n'afọ nke 71 ya, jere ozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị njem nde 15.7 na 2019, na -akwụsịghị ọrụ n'ofe North America na Europe na Asia.